मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने विप्लवका कार्यकर्ताकाे मृत्यु - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने विप्लवका कार्यकर्ताकाे मृत्यु
बाँके, भदौ १७ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव उपस्थित कार्यक्रममा कालो झन्डा देखाउँदै होहल्ला गरेको अभियोगमा पक्राउ परी ७ भदौदेखि प्रहरी हिरासतमा राखिएका युवा राममनोहर यादवको मृत्यु भएको छ ।
बिहीबार बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै बेहोस भेटिएपछि उपचारका लागि निकालिएका राममनोहरको शनिबार बिहान शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मृत्यु भएको हो । २ दिनसम्म नेपालगन्जमा उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि काठमाडौं ल्याइएका उनको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्रहरीको हिट लिष्टमा विप्लव
बिहीबार बिहान ६ बजे हिरासतबाट जिल्ला अस्पताल पुर्याइएका उनलाई प्राथमिक उपचारपछि प्रहरीले दिउँसो नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल लगेको थियो । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले २४ घन्टा आइसियूमा राखेर उपचार गर्न निर्देशन दिए पनि अस्पतालमा आइसियू बेड खाली नभएपछि तत्काल नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल रेफर भयो । तर, शुक्रबार दिउँसोसम्म राममनोहरको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल रेफर भयो ।
याे पनि पढ्नुस विप्लवका विद्यार्थीको बन्द घोषणा, राजधानीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द,
राममनोहरलाई भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्याउँदा प्यारालाइसिस भइसकेको थियो । अस्पताल ल्याउँदा टाउकोमा रगत जमिसकेको देखिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए ।
गिरफ्तार गर्नासाथ चारैजनाको स्वास्थ्य जाँच गरेको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य जाँचपछि म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको प्रवक्ता डिएसपी बोगटीले बताए । पहिलोपटक स्वास्थ्य जाँच गराउँदा राममनोहरको रक्तचाप उच्च देखिएको उनले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Banke, Biplab, Black Flag, राममनोहर यादव